Global Voices teny Malagasy · 19 Oktobra 2018
Septambra 2021 21 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny 19 Oktobra 2018
Shina: Tsy misy mpisolovava ho an'i Hao Wu
Azia Atsinanana19 Oktobra 2018
(2006) Tsy navela haka mpisolovava i Haozi, ilay blaogera tao Beijing. Manahy avokoa ireo akaiky azy, indrindra ny zokiny vavy izay manao ny faraheriny mba hahitana vahaolana amin'izany.
Avy amin'ny Tontolon'ny Blaogy Jordaniana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana19 Oktobra 2018
Lohahevitra maro no noresahin'ny blaogera tao amin'ny tontolon'ny blaogy Jordaniana
Manery ny fiovana amin'ny alalan'ny fitorahana blaogy II
Tohiny kely amin'ilay lahatsoratra ''Manery ny Fiovana amin'ny fitorahana blaogy'' nivoaka teo aloha.
Manery ny fiovàna amin'ny alalan'ny fitorahana blaogy
Afrika Mainty19 Oktobra 2018
Afaka manery ny fiovana ao Brunei amin'ny alalan'ny fitorahana blaogy ve ?
Nanokatra blaogy ny mpiasa tao amin'ny Al Jazeera noho ilay fanambaran'ny Daily Mirror fa ho darohan'i Bush baomba ny Al Jazeera.
Mamaky Blaogy ny Ayatollah Lehibe
Iràna19 Oktobra 2018
Mahagaga fa mamaky blaogy ihany koa ny Ayatollah Lehibe Montazeri ary tezitra toy ny rehetra momba ny fanasivanana tranonkala.
Eoropa Afovoany & Atsinanana19 Oktobra 2018
Maraoka : Fandroahana ireo evanjelisitra tao amin’ny tanànakelin’ny fanantenana.
Maraoka19 Oktobra 2018
Noroahina tao amin’ny firenena Maraokana, tsy nisy fampitandremana, ireo mpikambana miisa roapolo tao amin’ny ekipan’ny Tananakelin’ny fanantenana, trano fitaizana zaza kamboty iray any amin’ny tanànakely any ambanivohitr’i Maraoka noho ny fiampanga ho nitarika olona hanaraka ny finoany.
Ghana: Nahitana tolo-kevitra mahaliana ny fanitsiana ny lalàmpanorenana
Tamin'ny taona 2008, nandritry ny fifidianana filoham-pirenena, nampanantena an'ireo Ghaneana fa handinika ny lalampanorenan'ny firenena ireo kandidà. Ny fikasan'ireo mpifaninana hampiditra ny Ghaneana ao anatin'ny dingana fandinihana no nahatonga ity fampanantenana ity ho manintona kokoa.
Holandy: Namoy ny ainy teo amin'ny faha-100 taonany i Miep Gies, Vehivavy nanampy an'i Anne Frank
Holandy19 Oktobra 2018
Araka ny tatitry ny BBC, namoy ny ainy teo amin'ny faha-100 atona i Miep Gies, ilay hany mpikambana sisa velona tao amin'ny tarika izay nanampy an'i Anne Frank sy ny fianakaviany Jiosy handositra ny fisamborana tao Holandy nandritra ny Ady Lehibe Faha-2.